Type-Casting ကိုချိုးဖျက်ခဲ့သောထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် ၂၀ ဒီစာရင်းအတွက်ငါတို့ကအမျိုးအစားကိုဆန့်ကျင်ပြီးကျော်ကြားတဲ့နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေကိုကြည့်ကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲတွင် Adam Sandler, Tom Cruise, Jonah Hill, Heath Ledger, Bryan Cranston နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးစွယ်စုံရသရုပ်ဆောင်ဘယ်သူလဲ။ အောက်ပါမှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့သရုပ်ဆောင်ဗီဒီယိုတွေကိုဒီမှာကြည့်ပါ။ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်၏ထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် ၂၀ ဦး - https://youtu.be/FDdfGl01EuQ အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခက်ခဲဆုံးထိပ်တန်းသရုပ်ဆောင် ၂၀ တွင် https://youtu.be/37RubfhQBvU ထိပ်တန်း ၁၀ ကြိမ်သရုပ်ဆောင်များသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်များကိုအရိပ်ပေးခဲ့သည်။ https://youtu.be/SwT1BSfCKuI သင်၏စိတ်ကူးသည်ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်လာပါစေ။ https://wmojo.com/suggest ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများအတွက်စာရင်းသွင်းပါ။ https://wmojo.com/watchmojo-subscribe Great Deals များအတွက် WatchMojo Club သို့သွားပါ။ https://wmojo.com/WatchMojoClub ရုပ်ရှင်၊ တီဗီ၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်းများ၊ ရုပ်ပြများ၊ ကျော်ကြားသူများ၊ တေးဂီတနှင့်စူပါဟီးရိုးများမှထိပ်တန်း ၁၀ စာရင်း၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်လှည့်ကွက်များအတွက်သင်၏ယုံကြည်ရသောအခွင့်အာဏာ #WMFilm #WMA ဆရာဝန်များ #အသံလွှင့်ချက်
You can't paint these actors intoacorner! For this list, we’ll be looking at famous actors who played against type and earned widespread acclaim for their performance. Our countdown includes Adam Sandler, Tom Cruise, Jonah Hill, Heath Ledger, Bryan Cranston, and more! Who’s your favorite versatile actor? Let us know in the comments below!
Top 10 Times Actors Shaded Their Own Movies: https://youtu.be/SwT1BSfCKuI
(คลิปเดียวจบ) สปอยหนัง Hannibal4ภาค | กำเนิดฮันนิบาล...ฆาตกรกินคนตั้งแต่เด็กจนแก่